11 sanno jir awood u leh inay kuu sheegto midabka sheyga iyadoo indho xiran (Sidee ayey ku dhacday?) – Filimside.net
11 sanno jir awood u leh inay kuu sheegto midabka sheyga iyadoo indho xiran (Sidee ayey ku dhacday?)
Deepti Regmi, waa gabar 11 sanno jir ah, taasoo kasoo jeeda dalka Nepal, waxayna gabadhaani leedahay tayo aan caadi aheyn oo u gaar ah taasoo la ogaaday sannadkii lasoo dhaafay.
Deepti Regmi ayaa waxay awood u leedahay inay uruiso sheyga ka dibna ay sheegto midabkiisa (She able to smell colors), gabadhaan ayaana xitaa ogol in indhaha laga xiro, ka dibna ay kuu sheegto midabka sheyga aad u dhiibtay.
11 sanno jirtaan ayaa la ogaaday in aysan laheyn aqoon u gooni ah taasoo ka caawisay inay horumariso tayadaan u gaarka ah ee aan caadiga aheyn, balse waxaa la sheegay in awooddaani ay tahay mid adduunka ka jirta, dadka leh tayada nuucaan ah ayaana la ogyahay inay leeyihiin calaamadda Synaesthesia ee dareenka la xiriirta.
Dadka laga helo Synaesthesia ayaa awood u leh inay sanka wax ku dareemaan sida indhaha oo kale, sidaas waxaa daaha ka qaaday khubaro baaritaan sameeyey. Deepti Regmi ayaase aaminsan inuu Allah si gaar ah ugu manneystay haybaddaan.
Waxaa Aqrisay 343